Julian Assange, akatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi neimwe nemaBritish | Linux Vakapindwa muropa
Sekutevera kwapihwa pakasungwa Julian Assange pano pa blog (unogona kutarisa zvinyorwa mu Iyi link y izvi). Ichi Chitatu, Julian Assange akamira pamberi pedare reLondon nekuda kwekudzingwa kwake kubva kururamisiro mushure mekuwana hupoteri mu2012 kuEcuadorian Embassy muLondon. Dare reSouthwark rakangomutongera kwevhiki makumi mashanu mutirongo yekutyora mutemo wechibatiso chako.
Mwedzi 11 mutirongo mwedzi mumwe chete pasi pechirevo chakakura chakaiswa nemuvambi weWikiLeaks nenjodzi nehutongi hweBritain. Nguva yekuvharirwa kubva muna Kubvumbi 11 ichaonekwa uye Assange anogona kunyorera kusunungurwa kwake kwechinguva mushure mehafu mutongo wake wapfuura.
Nezvipi kune ese kuverenga akaitwa, zvinongoda kugara kwemavhiki makumi maviri nemaviri, kana ingangoita mwedzi mitanhatu.
"Mutongo waJulian Assange, wekukumbira uye kupihwa hupoteri, unorema zvakapetwa ruviri pane uya wakapihwa nemirayiridzo iyi," inodaro WikiLeaks.
Julian Assange, uyo akachengetwa mujeri reBelmarsh muLondon, akataura kuti haafanire kuiswa mutirongo nekuda kwemhosva iyi nekuti pachokwadi "akasungwa mumuzinda".
NeChitatu 1 Chivabvu, kuSouthwark Crown Court muLondon, Mutongi Deborah Taylor akaramba nharo idzi.
“Zvakaoma kufunga nezveumwe muenzaniso wakakomba wemhosva iyi. Nekuhwanda mumumiriri, akaramba nemaune vasingasvike ivo vari kuUK, 'mutongi anozivisa Julian Assange munhau.
Asati atenda, dare rakaverenga tsamba yekukumbira ruregerero kubva kuna Julian Assange umo akataura kuti anga akatarisana nemamiriro ezvinhu akaoma.
“Ndakaita zvandaifunga panguva iyoyo kuve shasha kana zvimwe chinhu chete chandaigona kunge ndakaita. Ndinozvidemba nekuchinja kuri kuitika kwezviitiko, "taura nhepfenyuro yemutauro weChirungu ichidudza Julian Assange mune vateereri.
Iyi nharo yakadzokororwa negweta rake panguva yekuchinjana mudare reBritish. Maererano nezano rake, Assange akapotera muEcuadorian Embassy nekuti aiziva kuti vakuru veUS vaimutsvaga.
Aida kwokupotera uko aisakwanisa “kubiwa ndokudzokera kuUnited States. Gweta rake rakatsanangurawo kuti Assange aitya kudzoserwa kuUnited States, nekuti hukama pakati penyika neSweden hunogona kusanganisira maitiro ekudzosera kunze kwenyika.
Mugwaro, Chikwata chaAssange chinotsanangura zvakadzama zvikonzero nei akafunga kupotera muEcuadorian Embassy muLondon uye mamiriro ekugara kwako.
"Akapedza angangoita makore manomwe ari ega, asina mukana wekurapwa kwakakwana, nzvimbo uye mwenje wepanyama, umo hutano hwake hwepanyama uye hwepfungwa hwakaderera zvakanyanya. Kubva panguva yakamhan'arwa nyaya iyi kuti ibatanidzwe, zvave zvisingaite kupa humbowo hwekurapa. Tiri kubatanidza ruzivo kubva kudare redzimhosva pane humbowo hwepamberi hwekurapa kubva kuna Dr. Michael Korzinski vachitsanangura mhedzisiro yepfungwa uye Dr. Tim Ladbrooke vachitsanangura mhedzisiro yemuviri. Tinovimba dare richabvuma kubva kumagweta ako kuti, paunogamuchirwa kuHMP Belmarsh.
“Muna Chikumi 2012, apo mutemo wekudzosera kuSweden wakava wekupedzisira, zvichiita kuti zvidzivirirwe zvaive zvisingadzivisike. Panguva ino yezvinhu, Sweden yakanga iine nhoroondo yakanyorwa yakanangana nekutaura kwakananga kuti dzaive panjodzi yekubatwa zvakaipa, kusanganisira kutambudzwa uye kufa. '
Sekureva kwe WikiLeaks, dziviriro yaAssange yakapa humbowo hwakawanda pakunzwa mutongo pamutongo wanhasi, asi mutongi haana kuzvifunga.
Kunzwa kwakatanga kunoratidza kutanga kweketani nyowani yezvinetso zvemutemo kuna Julian Assange.
Kubva nhasi (China, Chivabvu 2), achatarisana nedare zvakare yekutsinhana muchikumbiro chekudzosera kuUnited States.
WikiLeaks yataura zvinogona kuva mhedzisiro yekutongwa kuri kuuya uye inoratidza kutya kwayo kuti ruzhinji rwunoita kunge rwuri kutaurwa.
"Tiri kunetsekana chaizvo kuti achabatsirika here kubva mukutongwa kwakajeka kuUK"
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Julian Assange, akatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi neimwe nemaBritish